Soavaly Appaloosa sy ny palitao misy azy manokana | Soavaly Noti
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba an'io karazana Equine io miaraka amin'ny akanjo tena mampiavaka azy isika: ny Horona Appaloosa. Tsy isalasalana fa hiombon-kevitra amiko ianao fa a hazakazaka mendrika ho anisan'ireo tsara indrindra amin'ny equines.
Ilay kapaoty misy moty an'ny Appaloosa dia hita amin'ny sary hosodoko lava-bato frantsay 20.000 XNUMX taona lasa izay. Any Sina, tamin'ny andron'ny Dinasti MingSarobidy tokoa ity volom-borona ity ka hita ireo sarivongana Equine miloko solon'ireo Equine ireo. Taty aoriana kely, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, nandritra ny fandresen'ny Tontolo Vaovao, izay ahitàna volon'ondry hita eo amin'ireo soavaly espaniola.
Te hahafantatra bebe kokoa momba azy ireo ve ianao?
Toy ny amina karazana amerikana marobe, ny fiandohany dia miverina amin'ny soavaly nentin'ny Espaniola mpandresy tany Amerika. Taonjato maro lasa izay, efa nisy soavaly tany Amerika, saingy nanjary lany tamingana 11.000 tapitrisa taona lasa izay.
Aorian'ny fampidirana indray ny mitovy amin'i Amerika, IRETO niely izy ireo samy soavaly an-trano sy soavaly bighorn manerana ny kaontinanta. Ireto farany dia misy lanjany manokana raha ny momba ny karazany Appaloosa.
Ireo soavaly maro dia ireo sisa tavela, Na satria nandositra izy ireo na satria navoakan'ny tompony nandritra ny ririnina mba tsy hitazomana azy ireo na noho ny antony hafa. Ireo fitoviana dia nifanaraka tamin'ny fiainana dia sy namorona omby nanerana an'i Amerika.
Appaloosa misy tsikelikely
Tamin'ity fotoana fahalalahana ity tamin'ny soavaly hita sasany, rehefa hitan'ny Indiana Nez Perce izany biby miaraka amam-bolo mahaliana, izy io dia namboarina tamin'ny prototype an'ny biby ilain'izy ireo amin'ny haza lambo sy ady. Hitan'izy ireo ny fahamendrehan'ireto equines ireto, ny fahaizany sy ny tanjany, izay nila nampiany ny kapany mampiavaka azy.
Nandritra ny 200 taona mahery, ny Nez Perce voafantina ireo soavaly manana toetra tsara kokoa ary nampiasain'izy ireo izay mifanitsy indrindra amin'ilay hazakazaka izay noeritreretin'izy ireo. Ka tsikelikely ireo toetra izay mampiavaka ny soavaly Appaloosa dia napetraka ankehitriny.
2 Ny palitaon'ny soavaly Appaloosa
3 Bebe kokoa amin'ny tantarany
Ny Nez Perce Indiana dia nanangana ny soavaliny hihazaza sy hiady amin'ny foko mifanila aminy, noho izany dia a karazana matanjaka misy fanoherana lehibe mandritra ny andro tsy mila misotro sy misakafo. Ireo toetra ireo dia nanova azy ireo ho soavaly ankehitriny tena sarobidy amin'ny fitsapana hery sy fiaretana, fanafihana, taonina sns.
Miaraka amin'ny haavony eo anelanelan'ny 145 cm sy 160 cm, dia raisina ny Appaloosa iray amin'ireo hazakazaka haingana indrindra misy izany ankehitriny.
Manolotra a rump boribory sy tena hozatra, fantsika rantsan-tongotra mahery be miaraka amin'ny bony fisehoana. Matetika izy ireo dia tsy manana volo be dia be amin'ny rambony sy mana. Kely dia kely ny sofin'izy ireo ary lehibe ny masony.
Andininy roa izay mampiavaka ity karazany ity, ankoatry ny hodiny sy ny palitaony izay horesahintsika amin'ny fizarana manaraka dia: amin'ny lafiny iray izay sclera (ny faritra fotsy amin'ny mason'olombelona) fotsy ary hita kokoa noho ny karazany hafa soavaly izay ihany no ahitana azy raha miakatra ny biby, midina na mankamin'ny iray amin'ireo sisiny. Ary etsy ankilany, manana fiarovan-doha mitsivalana mitsivalana miaraka amin'ny tsipika maivana sy maizina.
Raha ny momba ny toetra amam-panahy dia eo alohan'ny ekipazy sasany isika be herim-po, mahery fo ary mavitrika, hazakazaka izay miavaka amin'ny hafainganam-pandehany sy ny hakingany.
Ny palitaon'ny soavaly Appaloosa
Ny palitao misy totika an'ireo soavaly Appaloosa dia tsy isalasalana fa azy ireo endri-javatra miavaka sy tsy manam-paharoa indrindra. Fa zava-dehibe ny fahalalana izany tsy ny soavaly hita rehetra no an'ity karazana ity.
Ny Appaloosa dia manana hoditra mavokely miaraka amin'ireo faritra maizina misitery, manome azy ny endrik'ilay hoditra mandrevo, zavatra iray tsy izy ihany mitranga amin'ny vatana izany fa koa amin'ny molotra, manodidina ny maso sy ny faritra maha-lahy na vavy. Izany dia tsy maintsy ampiana ireo toetra voalaza etsy ambony amin'ny fiarovan-doha misy tsipika sy ny sclera fotsy toy ny olombelona.
Andao hiresaka izao ny karazana sosona isan-karazany izay azontsika jerena ao anatin'ity karazana ity:
By drop: Eo amin'ny fototra maivana, nozaraina ny andiana teboka maizina kokoa.
Snowflake: Maizina ny lokon'ny fotony raha fotsy kosa ny teboka eo amin'ilay fotony ary aparitaka manerana ny vatana.
Marbled: Ao amin'ity palitao ity, ny tapany eo aloha dia manana fototra maizimaizina misy teboka fotsy sy miloko hafa, raha ny faritra aoriana amin'ny soavaly kosa dia misy fotony maivana sy maizina. Maizina matetika ny rantsam-batana.
Leopard: Amin'ny toerana maivana misy oval dia zaraina manerana ny palitao.
Valahana maivana: Ny faritra rump sy ny voa dia maivana amin'ny maizina. Maizina koa ny mana.
Valahana voahitsaka: Ity karazana farany ity dia heverina fa mety ho ilay niavian'ny hazakazaka; Izy io dia ahitana fa ny rofy sy ny voan'ny biby dia maivana loko ary misy pentina maizina.
Amin'ny ankapobeny, ny lokon'ny palitaon'ny lahy dia mazava kokoa noho ny an'ny vehivavy.
Ny anarana "Appaloosa" dia avy amin'ny anaran'ny renirano niampita ny tanin'ny Nez Perce: ny reniranon'i Palousse.
Ity karazana nateraky ny Nez Perce ity dia mahery sy henjana, izany Tamin'ny 1876 ny governemanta Amerikana Avaratra dia nandidy ny hamongorana ny soavaly Appaloosa rehetra, amin'ny fahafantarana fa izy ireo no fitaovam-piadiana tsara indrindra amin'ity foko ity.
Soa ihany fa tsy nahomby ity baiko ity ary manda kely misy an'i Appaloosa dia tafavoaka velona.
Zava-dehibe ny taona 1938 ho an'ity karazany ity avy eo natsangana ny Club Horse Appaloosa (APHC) ary nanomboka ny famerenana ireo soavaly sarobidy ireo. Androany tsy misy Appaloosa azo raisina ho "madio" raha tsy misy taratasy fanamarinana mety avy amin'ny APHC.
Ity fikambanana ity dia nametraka programa ho an'ny famerenana amin'ny laoniny sy fanatsarana ny karazany Appaloosa. Ireo santionany sisa velona dia nifangaro tamin'ny hazakazaka kilaometatra kilometatra na arabo (avy aiza ny hazakazaka AraAppaloosa) ho an'ity tanjona ity.
ankehitriny ny isan'ireo Appaloosa voasoratra anarana dia maherin'ny 600.000, ka io no karazany fahatelo malaza indrindra izao tontolo izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Soavaly Appaloosa sy ny palitaon'izy ireo mampiavaka azy
Fiara fitondra soavaly: tantara, karazany ary fampiasa